Irestyu yokuThengisa abaThengi yezeNtlalontle ngo-2012 | Martech Zone
Irestyu yokuThengisa abaThengi yezeNtlalontle ngo-2012
NgoLwesihlanu, Novemba 30, 2012 NgoLwesithathu, Novemba 28, 2012 Douglas Karr
Kubekho ubungqina obuninzi kwimpembelelo yeselfowuni kwiindlela zentengiso eziqhelekileyo, kodwa kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba isimilo soMthengi seNtlalontle (MoSoCo) sinefuthe elikhulu kwivenkile yokutyela nakwiinkonzo zokubuk 'iindwendwe!
Amaqonga eselfowuni kunye neetafile ziye zaba yimveliso yolu tshintsho lwetekhnoloji, kwaye ayimangalisi into yokuba indawo yokutyela, ukutya kunye neempawu zokubuk 'iindwendwe zibambe ngokungena ngaphakathi. Kule Rhafu yokuThengiswa kwabaThengi abaThengiweyo yoLuntu eziswe kuwe yiDijitCoCo kunye neRestauranti yeNtengiso yezeNtlalontle, Siza kujonga ukuba zeziphi iimveliso ezisebenzisa imbonakalo entsha yeselfowuni kunye nezentlalo eyona ilungileyo ekubandakanyeni abathengi. Ukusuka kwiNgcaciso yoMthengi weNtlalontle yonyaka ka-2012
tags: geolocationu bubeleiinkonzo ezisekwe kwindawomosocorestaurantishishini lokutyela
Nyusa i-App yakho ye-iPhone ngeSmart App Banner
Iindlela eziHambisayo zeNtengiso Abathengisi abanakuzihoya
Ngomhla wama-3 ku-Disemba 2012 ngo-2: 55 PM
Le yidatha exabisekileyo ngokwenene, kwaye ayisiyiyo eyokutyela kuphela. Ndiva ngathi ithetha lukhulu kuwo nawaphi na amashishini amancinci, abantu baqala ukusebenza nangakumbi ekuhlaleni kunye nezinto abazithandayo nabangazithandiyo. Iziphumo zokuqala ezi-2 zokukhangela kum yile nto ibalulekileyo kwibhodi yonke: Indawo kunye nokuHlola. Idatha enkulu yalo naliphi na ishishini elincinci lokuhlawula.